Mepụta nnukwu nyocha 3D maka uda Pi | Akụrụngwa n'efu
Joaquin Garcia Cobo | | Nkọwa 3D, Ntu Pi
Ofwa nke mbipụta 3D na-eto n'ike n'ike. Agbanyeghị, mbipụta 3D ugbu a dabere na ịnweta ụdị 3D ma bipụta ha. Yabụ, ị naghị emepụta ụdị 3D mbụ. Maka nke a, ndị ọrụ na-eji nyocha ihe. Ma Ọ bụrụkwanụ na anyị enweghị nyocha ihe? Gịnị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ i scanomi a ibu ihe? gịnị ka anyị ga-eme?
Otu onye na-eme Britain jisiri ike chọta ngwọta ya. Onye rụrụ ya kpọrọ ya Poppy Mosbacher emeela ihe nyocha 3D maka ndị mmadụ. Emepụtara gadget a maka ụlọ ọrụ ya, ụlọ ọrụ ejiji na-achọ ịmepụta ụdị 3D ngwa ngwa.
Poppy Mosbacher emeela ihe nyocha 3D n'iji akụrụngwa efu na sọftụwia efu. Oge a etinyebeghị mbadamba sitere na ọrụ Arduino mana o jiri mbadamba sitere na Raspberry Pi. Kpọmkwem ejirila Pipe Pi Zero na Pi Cam.
Emeela usoro mbadamba a ugboro iri abụọ na asaa, ya bụ, nyocha ahụ na-eji mbadamba 27 Raspberry Pi Zero na 27 PiCams nke ekesara na nnukwu usoro niile. A na-eke nnukwu ihe owuwu a jiri kaadiboodu na eriri na-ejikọ mbadamba niile na otu ngwaọrụ nke na-arụ ọrụ dịka ihe nkesa. Sọftụwia ejiri mee ihe nyocha a nke 3D bụ Megharịa Autocade, sọftụwia na - ahazi onyonyo iji mepụta ụdị 3D.
Ọ dabara nnukwu 3D nyocha a anyị nwere ike ịmepụ ma wuo onwe anyị ebe okike kere ya ebugo ya Ntuziaka nchekwa ihe. N'ime ụlọ ọrụ nchekwa a, anyị na-ahụ ntuziaka akụrụngwa, ntuziaka ụlọ na ngwanrọ niile dị mkpa maka mbadamba Pi Zero niile. Ogwe Pi Zero na-enwekarị aha ọma maka ịbụ obere ikike na nke ahụ nwere ike ịbụ ikpe, mana ha bara ezigbo uru, opekata mpe maka onye ọrụ njedebe Not cheghị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Nkọwa 3D » Ha na-ekeputa igwe nyocha buru ibu nke 3D ekele Raspberry Pi
Anyị emeela ihe nyocha 3D nwere igwefoto 108.
DeltaQuad, nke nwere ike ime ka ihe di ka kilomita 150 nke nnwere onwe
BASF na-achịkwa Dutch filament emeputa Innofil3D